Apple ndiyo kambani yakatenga mamwe ma processor muna 2017 | IPhone nhau
Smart zvishandiso zvinonzwisisika zvinoda ma processor. Iwo mapurosesa uye machipisi akasiyana siyana anoumba michina yatinoshandisa nhasi yaita semiconductor yekugadzira musika bhizinesi rakanaka kwazvo.
Zvinoenderana neazvino data, iyo Cupertino kambani rave rakakura semiconductor investor weese 2017, kujekesa kuti iri kure nekudonha mukutengesa mune chero chikamu chemapoka maanotora chikamu. Apple iri mupenyu kupfuura nakare kose, uye nenzira iyo yainoraira kuti zvigadzirwa zvayo zviitwe zvinoratidza izvozvo, hatigone kuzviramba.
Pakati peApple neSamsung (yechipiri kambani yakaisa mari zvakanyanya mumhando iyi yechinhu), takaisa mari inodarika zviuru makumi masere emadhora, izvo zvaizomiririra kuwedzera kwemamirioni zviuru makumi maviri, kana makumi maviri muzana zvichienzaniswa negore rapfuura ra20.000, zvese zvinoenderana nedhata izvo DigiTimes akagovana.
Samsung neApple havana kungo chengetedza zvinzvimbo zvavo semutungamiri uye wechipiri mukutora kwerudzi urwu rwezvigadzirwa, asi vakawedzera zvakanyanya kudyara muma semiconductors mugore ra2017.
Makambani maviri aya akabata nzvimbo dzawo kubvira 2011 uye achiramba achikanganisa zvakanyanya tekinoroji nemitengo yezvigadzirwa izvi. - Masatsune Yamaji (Gartner)
Zviripachena mu "Top 10" yemakambani anoisa mari zvakanyanya muma processor Isu nenzira isingafadzi tinowana mamwe makambani ane mbiri senge LG, chinzvimbo icho chakakundwa gore rapfuura, Ichokwadi ndechekuti chikamu chayo chemafoni chakamutsiridzwa, kunyange chakakurumidza kufukidzwa nemamwe makambani anopa chaiwo akafanana nezvimwe zvinokwezva maficha. Nekudaro, makambani gumi anoisa mari zvakanyanya mu semiconductors account ye40% yezvose zvigadzirwa zvepasirese, uye zvese zvicharamba zvichikura sezvo zvigadzirwa zvakawanda zvakagadzirwa uye zvakawanda zvemagetsi zvemutengi zvatinowana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple ndiyo kambani yakatenga mapurosesa mazhinji muna2017
Iyo iPhone ye2018 inogona kusvika 4 GB ye RAM